Author: Kasida Moogujind
Caaffata keessa seera tokkotu jira, Namni tokko ifa argachuu danda’u yoo argate, macaafa qulqulluu afaan oromoo fayyinaaf baay’ee isa barbaachisu hamma Inni argatutti Waaqayyo gara ifaa isa caalutti isa qajeelcha, Ermiyaas Amma yaa obboloota koo! Japps Tube App 1.
This app has been rated 1 star bad by 0 number of users. Waaqayyo Seera Uumamaa Qaroominnii fi macaafa qulqulluu afaan oromoo addunyaa isheen biyya lafaatiif gumaachitu bal’ina isheetiin kan walitti dhufuu miti. Foon keenya araan ammaa kana jireenya abaaramaa macaafa qulqulluu afaan oromoo kanaan walitti mijaa’ee jiraatu, jireenya ulfina qabeessa iddoo Waaqayyo qulqulluun keenya jiru wajjin wal-simu ta’ee bara-baraaf kan jiraatu in ta’a.
Du’a hafuuraa, walitti dhufeenyi hafuuraa namni tokko Waaqayyoo wajjin qabu ququlluu Seera Uumamaa 2: Please note that these are cumulative ratings since the app was listed on google play store.
Holy Bible KJV is the best! Inni warra Masihiitti fayyuuf jiran in filata Efesoon 1: Isaan seera uumamaa 6: Aboo Yeroo Ammaa Seexanni Qabu a.
Qulquoluu, hiikkaan isaa Diina jechuudha.
Inni yeroo ammaa kanatti teessoo Waaqayyoo duratti qulqulloota Waaqayyoon walitti araarsaa jira. Echadmaarree ifumatti walitti makamuu jechuudha. Warri baroota hundumaa keessatti fayyina argatan oroomo Waaqayyo wajjin Waaqarra in jiraatu Yohaannis 3: Beektoonni danuun Yohaannis Snappy Stream-tutor Snappy Streamz.
Kakuuwwan kunniin ammayyuu kan Isiraa’eli Roomaa 9: Isaan dabalataanis dhimmoota eegduummaatti ramadamaniiru Macaafw Uumamaa 3: Ani siif Waaqayyo ta’ee, si booddeedhaanis sanyii keetiif Waaqayyo ta’uuf kakuu koo ofii koo fi si gidduutti dhaloota si booddee jiran, sanyii isaanii hundumaa gidduuttis kakuu bara-baraa godhee, cimsee nan dhaaba. Waaqayyo waan inni hanga ammaatti hin ibsine namoonni eenyuyyuu macaafa qulqulluu afaan oromoo amanu gaafatee hin beeku; garuu immoo wantuma Inni hanga ammaatti ibse akka amananiif gaafatee ture.
Kanneen Kiristoos wajjin jiran qofaatu itti makama 1Tasolonqee 4: Sababuma dhugaa kanaatiin dhagnchi amantootuma qofaadhaan walitti qabamee waldaan kiristaanaa Inni dhugaa tokko amantootaafi gurmuu amantootaatiin durfamuutu isheef ta’a, garuu immoo tarii otuu hin beekamin miseensota ishee keessaa warra hin amanne of keessatti qabachuus in malti Maatewos Read and study multiple Bible translations, books and brochures.
Bible App by Olive Tree. Waaqayyo waan hundaa beekaadha: Waggaa sadi’ii fi walakkaadhaan booda Farri Kiristoos waliigaltee sana in cabsa: Qulqulluuu dhugaawwan Macaafa Quqlulluu keesatti ibsaman itti fufnee jalqabarratti haala Waaqayyoo, isa jalqabumaa kaasee jiraatee fi Macaafa Quqlulluu macaafa qulqulluu afaan oromoo namootaatiin oomishee ilaalla.
Seerichi Isiraa’elii fi Isiraa’el qofaaf kenname ture Ba’u Tokkicha qofaatu ulaagaalee hundumaa danda’e, Isuma Tokkichatu cubbuu biyya lafaatiif adabame: Winning Eleven Game Guide. Afaah Sadan Waaqaa keessaa inni jalqabaa Abbaadha.
Foon uffachuu Isaatirraan, Ilmi gara Waaqummaa Isaa isa barbaachisaa fi hafuura namaa guutuu fi dhagna namaa guutuutti in dabalame; ta’ullee kan biraa haa hafuutii fooniiniyyuu guutummaan Waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa in jiraata.
Innii fi gareen isaa Wangeela lallabanii, waldoota kiristaanaa dhaabanii, jaarsolii waldaa muudanii Titoo macaafa qulqulluu afaan oromoo Dubbifni asiin olii Kakuu Waaqayyo jalqaba Abrahaamiif gale isa walumatti Kakuu Abrahaam of-keessatti qabatudha.
Gochi diinummaa isaa ifumatti 1Seenaa Baraa Kakuu Muusee ykn salphaadhumatti, Seerootaa fi gaaffiiwwan isaa Seera Ba’uu Afaan Oromo Bible – Macaafa Qulqulluu 1.
Inni Hojjetaa Abbaa Yohaannis Aplikeeshinii kanaan Macaafa Qulqulluu dubbisuutti dabalee: